UTHANDO LWEBHOLA LUMENZE WATHENGA IQEMBU – Sivubela intuthuko Newspaper
Usihlalo weqembu iNatal Rich Boyz ethula inkulumo emcimbin wokuklomelisa abadlali
Omunye wabadlali baleli qembu eyolanda umklomelo wakhe
USIHLALO weqembu laseSkhaleni enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal iNatal Rich Boyz egijima esigabeni seSAB League uNgamla Mthethwa uthi uthando lwebhola yilona elimenze wagcina esethenga iqembu elidlala kulesi sigaba. “Ukuba nothando lwebhola ngisakhula yikhona okungenze ngagcina sengingena ebheni ngathenga iqembu lebhola. Bengifisa nokunika abafana ithuba lokuthi bazibonakalise ebholeni,” kusho Mthethwa.
Leli qembu elaziwa ngokuthi iNatal Rich Boyz (NRB) belisingethe imiklomelo yokusongwa kwesizini ka-2017/18 njengoba belibalwa namanye amaqembu angase adle ubhedu kulesi sigaba saseKing Cetshwayo kodwa ligcine likwazile ukuqeda isizini lihleli endaweni yesithathu.
“Angigcini ngebhola kuphela njengoba ngiphinde ngibagqugquzele abafana ukuthi bagxile emfundeni ngoba angeke badlale ibhola.impilo yabo yonke. Ibhola liphinde libasize kakhulu ekutheni bangazimatanisi nezinto ezingalungile ezifana nokusebenzisa izidakamizwa kanjalo.nobugebengu,” kuqhuba Mthethwa.
UNyambose ubonge kakhulu abazali babafana, umphakathi obubaseka ngaso sonke isikhathi.uma beyodlala kanjalo nomasipala.uMhlathuze kanye nosomabhizinisi abazimele ngokuqhubeka bameseka kuleli qembu.
“Ngifisa ukubonga kakhulu kubazali ngokudedela izingane zabo ukuba zibe yinxenye yeqembu leNRB, kanjalo nomphakathi osesekayo ngaso sonke isikhathi,” kuphetha uMthethwa.
Leli qembu libukeka linekusasa njengoba kunomdlali oseyojoyina iDurban Stars osuka kulo uBash odlala esiswini .
IBUCS IQINISE ISIKWATI NGABADLALI ABASHA